FIANARANA KABARY-NY AMPINGA : “Mihamaro an’isa hatrany ny vehivavy mikabary….”
Anisan’ireo sehatra ironan’ny vehivavy malagasy ankehitriny ny fianarana kabary. 7 janvier 2021
Manaporofo izany ny fitomboan’ny isan’izy ireo mandranto fahaizana amam-pahalalana eny amin’ireny toerana na fikambanana maro samihafa natokana hampianarana izany. Iray amin’ireo fikambanana misy eto amintsika, ka mampianatra ity kolontsaina maha-malagasy ity ny fikambanana “Ny Ampinga” izay manana ny foiben-toerany eny Antanjombe Ambohimanarina.
Ny fikambanana izay nijoro efa folo taona lasa dia manana ny filamatra manao hoe : “Hampandroso hatrany ifotony ny Teny sy ny Soatoavina Malagasy”. Araka ny fanazavan’ny filoha mpanorina ny fikambanana “Ny Ampinga”, Manampisoatoavina Mitahiry Fahendrena : « mihamitombo hatrany ny isan’ireo vehivavy mianatra kabary eto Madagasikara amin’izao fotoana izao ».
Tamin’ny fanandratan’ny fikambanana ny “andiany Tafika” indray mihira faha-12, ny alahady 27 desambra 2020 teny Analamahitsy dia nahatratra 200 mianadahy mianaka ny isan’izy ireo. Laharam-pahamehana ho azy ireo ny fanandratana ny maha malagasy amin’ny alalan’ny fianarana kabary. Ireto mpikabary nanaraka fiofanana tao amin’ny fikambanana Ampinga ireto dia nianatra ireo sokajin-kabary rehetra ilaina eo amin’ny fiainana andavanandro.
Anisan’izany ny kabary an-kafaliana sy ny kabary an-karatsiana. Ireo mpianatra avy amin’ireo toerana efatra (LTP Alarobia, ANS Ampefiloha, Lycée Privé Fanoellie Imerinafovoany, Lycée Privé Anglican Saint Jean Ambohimangakely) fampianaran’ny fikambanana Ny Ampinga ny kabary ireto nasandratra ireto.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2031) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (909) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (205) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (110) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (93) 2 mars 2021